Ego Economic: Ntughari mbufụt China na Eprel ebe akara COVID-19
N’abali asaa, Mee 7 (Xinhua) - Mbubata ngwa ahịa ndị China na-atụgharịghachi n’ọnwa Eprel, na-agbakwunye na akara na azụmaahịa mba ofesi na-ejigide ya ebe ọzọ na-atụzi COVID-19.
Mbubata ala nke mba ahụ ritere elu 8.2 pasent afọ na afọ ruo 1.41 trillion yuan (ihe dị ka ijeri US dollar 198.8) na Eprel, ma e jiri ya belata pasent 11.4 na nkeji mbụ, General Administration of Customs (GAC) kwuru na Thursday.
Mbubata mbula ruru 10.2 na 1.09 trillion yuan n'ọnwa gara aga, na-ebute mgbakwunye ahia azụmaahịa ruru ijeri 318.15.
Azụmaahịa ndị si mba ọzọ jiri ngwongwo belata 0.7 pasent n'afọ na Eprel ruo puku ijeri 2.5 trillion, na-warara site na dobe pasent 6.4 na Q1.
N'ime ọnwa anọ mbụ, ahia ndị si mba ofesi ruru ijeri 9.07 trillion, ihe ruru pasent 4.9 n'afọ kwa afọ.
Nweghachi nke mbupụ na mbupụ gosipụtara nnukwu nguzogide nke akụ na ụba China na nnukwu mpụga chọrọ maka ngwongwo ndị China mepụtara, Zhuang Rui, osote onye isi nke Institute of Economy International na Mahadum International Business na Economics kwuru.
Azụmaahịa mba ofesi bidoro ibute site na COVID-19 ka ụlọ ọrụ na-emechi emechi yana iwu ndị mba ọzọ jụrụ.
Na-emechi omume a, azụmahịa ndị China na ASEAN na mba ndị ọzọ na Belt na Road nọgidere na-eto.
N'ime oge ọnwa Jenụwarị na Eprel, ASEAN na-ejigide onye ọrịre azụmaahịa China kacha elu na azụmaahịa 5.7 n'ime afọ kwa afọ ruo 1.35 trillion yuan, na-aza pasent 14.9 nke oke azụmaahịa mba ofesi.
Ejikọtara ọnụ ahịa na mba n'akụkụ Belt na okporo ụzọ bulitere 0.9 pasent ruo 2.76 trillion yuan, na-aza 30.4 nke ngụkọta, mmụba nke 1.7 pasent isi afọ kwa afọ.
Ebugharị na mbupụ ngwa ahịa na European Union, United States na Japan belatara n'oge a, data GAC ​​gosiri.
Privatelọ ọrụ onwe onye bụ nnukwu ihe nyere aka na azụmaahịa mba ofesi na ọnwa anọ mbụ, ọnụ ọgụgụ azụmahịa ya na-agbasa site na pasent 0,5 ruo ihe dị ka trillion 3.92.
China ewepụtala usoro iji nyere ụlọ ọrụ aka azụ ahịa aka ịmaliteghachi mmepụta n'etiti mkpochi COVID-19.
E webatara onyinye iji belata ọnụahịa ụlọ ọrụ ma nyere ha aka inweta mgbazinye ego dị ọnụ ala, ebe usoro nchịkwa ndị dị na kọmpụta na-agbadata ịkwado mbupụ na mbubata.
Ọrụ ụgbọ oloko China-Europe abụrụla ụzọ dị mkpa maka ngwa agha iji hụ na ahịa dị ka ikuku, oké osimiri na ụzọ ụgbọ mmiri si metụta nke ukwuu.
Site na Jenụwarị ruo Eprel, ngụkọta ụgbọ oloko China-Europe na-ebugharị ụgbọ elu nke 262,000 TEUs (nkeji abụọ ka nha 20), pasent 24 na pasent 27 site na otu afọ tupu mgbe ahụ.
N'ịchọpụta na ntiwapụ ahụ ebutela ọnọdụ na-enweghị mgbagha na azụmaahịa, Ni Yuefeng, onye isi GAC, kwuru na mba ahụ ga-agbasawanye ngwungwu amụma ya iji gbochie mmetụta COVID-19 ma kwalite uto nke azụmahịa mba ofesi ogologo oge.
Ebe e si nweta ya: Xinhua Net